Uyisebenzisa kanjani i-iPad Isikhokelo soMsebenzisi esikwi-Intanethi
Isikhokelo somsebenzisi kwi-iPad esikwi-Intanethi siyafana nenkqubo yoNcedo kwikhompyuter yeWindows okanye ye-Mac. Isikhokelo soncedo esikwi-Intanethi sifikeleleka kwisikhangeli seSafari, njengendawo enebhukumaki.
kufuneka ugcine imithungo igqunyiwe
Sebenzisa Isikhokelo somsebenzisi kwi-Intanethi ukufunda ukusebenzisa i-iPad yakho, okanye ukuphendula umbuzo okhawulezileyo. Umzekelo, ukuba unomdla wokusebenzisa iifoto, Isikhokelo somsebenzisi we-iPad yindawo elungileyo ukuqala. Apho, kungekudala uza kufunda ukuba ungazithatha njani iifoto kunye neevidiyo, ubonise iifoto zakho kwisilayidi, okanye usasaze ividiyo kwi-HDTV yakho.
Ukufikelela kwisikhokelo somsebenzisi se-iPad kuyakhawuleza kwaye kulula kuba kulapho kwi-iPad yakho.
1Ukusuka kwisikrini sasekhaya se-iPad, cofa kwi icon ye-Safari.
Isikhangeli sewebhu seSafari siqala.
MbiniThepha uphawu lweBhukumaka. Kwimenyu yeebhukumaki ebonakalayo, cofa isikhokelo somsebenzisi we-iPad.
Isikhokelo soMsebenzisi we-iPad siboniswa kwiwindow.
3Thepha isihloko ngasekhohlo.
Uluhlu lwezihlokwana ezisebenzayo luboniswa kwicala lasekunene lesikrini.
Ulwazi malunga nemixholo engezantsi ekhethiweyo luyaboniswa. Thepha naliphi na ikhonkco kulwazi olusemxholweni ukufikelela kwizihloko ezongezelelweyo.
5Cinezela iqhosha lesikrini saseKhaya.
Unokufikelela kwi Isikhokelo soMsebenzisi we-iPad kwikhompyuter yakho, kwisikhangeli sayo sewebhu ukuba uyafuna.
ubungakanani bebhola ekhatywayo ezinyaweni
iyeza elifanelekileyo le-fibromyalgia
iziphumo ebezingalindelekanga zecapsule
amoxicillin yomqala womqala
Ungayithatha njani i-methylprednisolone